Waaltaan Haaraa Eegumsaa fi Qorannoo Biyyoolessaa Itiyoopiyaa Eebbifame – Kichuu
HomeNewsAfricaWaaltaan Haaraa Eegumsaa fi Qorannoo Biyyoolessaa Itiyoopiyaa Eebbifame
Waaltaan Haaraa Eegumsaa fi Qorannoo Biyyoolessaa Itiyoopiyaa Eebbifame
(VOA Afaan Oromoo) – WAASHINGITAN, DIISII — Eebba waaltaa kanaa irratti ibsi embasiin Ameerikaa barreeffamaan raabse akka jedhutti waaltaan kun kan ijaarame dhaabbati to’annaa fi ittisa dhukkubootaa US deggersa maallqaa PEPFAR irraa argateeni.
Waaltaan qarshiin miliyoonni 150 ol itti ba’e jedhame kun to’annaa fayyummaa hawaasaa, qorannaa fi walitti dhufeenya laboraatoriif waaltaa leenjisaa fi deggersaa ta’uun kan tajaajilu ta’uu ibsi barreeffamaa sun beeksiseera.
Itiyoophiyaatti tti gaafatamaan dhimmootii hojii raawwachiisa gameessi embasii Ameerikaa Peter Virumaan waaltaan kun kanatti dabaluun tajaajilli inni kunnu
fayyummaa hawaasa Itiyoophiyaa to’achuu, qorannaa fi caasaa laboraatoriif bu’uura ta’uu dhaan tajaajila eegumsa fayyaaf ogeessota qorannaa geggeessaniif bakka itti wal ga’an ta’uu dhaan qooda ol aanaa qabaata jedhan.
Kun dhugumatti waaltaa leenjisa biyyoolessaa ti. Kana waan ta’eefis qaamotii dhimmi ilaallatu walitti fida. Ministeera eegumsa fayyaa dabalatee, Yuniversitiiwwan, dhaabolii eegumsa fayyaa addunyaa fi dhaabota waldaa siivilii walitti qabuu dhaan rakkoo fayyummaa kan
Oromo Struggle-Kun sirba aadaa Abush Zallaqaa ti. Sirba aadaa Oromoo Booranaa ti.
Kosii Finfinnee Sandaafaatti Geessanii Gatuuf Karoorfamuun Nu Yaaddeessa: Jiraattota